गृहले गर्‍यो चार डिआईजीसहित २७ एसएसपीहरुको सरुवा (सूचिसहित) - Internet Khabar
गृहले गर्‍यो चार डिआईजीसहित २७ एसएसपीहरुको सरुवा (सूचिसहित)
August 16, 2018 August 16, 2018 Internet Khabar
काठमाडौं, ३१ साउन । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ४ जना डिआईजी (प्रहरी नायव महानिरीक्षक) र २७ जना (प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक) एसएसपीहरुको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार साँझ उनीहरुको सरुवा गरेको हो । डिआइजीहरुमा महेश विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह, सुरज केसी र धिरु वस्न्यातको सरुवा भएको हो । बस्न्यातलाई अपराध अनुसन्धान विभाग अ.नि.ब्यूरोबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ भने प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नं.६ सुर्खेतमा कार्यरत डिआईजी शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत महेश विक्रम शाहलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नं. ६ सुर्खेतमा सरुवा गरियो भने केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयबाट प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नं. ७ दिपायल सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा एसएसपी वसन्त लामालाई सरुवा गरेको छ । हालका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलको ठाउँमा एसएसपी लामालाई सरुवा गरिएको हो । गृहमन्त्रालयले एसएसपी पोखरेललाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सरुवा गरेको छ ।
हेर्नुहोस् अरु को कहाँ :
धर्मगुरुद्वारा एक हजार बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार
दुर्घटनामा परी १११ जना दुइपाङ्ग्रे चालकको मृत्यु
संरक्षण अभावमा तीन प्राकृतिक ताल पुरिँदै
एमालेको नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रविधिमैत्री स्कुल
बारपाकलाई विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय केन्द्र बनाउँछु – प्रधानमन्त्री दाहाल